Uru na ọghọm dị n'ime ike ikuku | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
O doro anya na ume ọhụrụ ga-agbanwe ọdịnihu na ọkara na ogologo oge, mkpa ịchọ ụdị ike ndị ọzọ iji dochie ihe ndị na-emewanye ngwa ngwa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ike ikuku ụwa, anyị na-ezo aka n'ụdị ụdị ume ọhụrụ, ma ọ bụrụ na ejiri ya rụọ ọrụ Direct dị elu, nke ahụ bụ, ikike nke ịmaliteghachi nke nkwụnye ego ahụ bụ ihe na-erughị nke mmịpụta, kwuru na mmeghari ohuru ga-efu.
1.2 akụkọ ihe mere eme
3 Ike ikuku na Spain
Ike ikuku ala bu ume emeghari ohuru nke ahụ na-eji okpomoku nke okpuru ala ahụ ọkụ ma nweta mmiri ọkụ dị ọcha n'ụzọ obibi. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n’ime ihe ndị nwere ike imeghari ohuru obere mara, mmetụta ya dị egwu iji nwee mmasị n'okike. N'ezie anyi nile nwere ike icheta onyonyo nke ugwu Etna nke di na Sicily na mgbawa zuru oke, anyi anwalegola izu ike nke mmiri oku ma obu nwee obi uto fumaroles na geysers, dika ndi di na ogige Timanfaya na Lanzarote.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, ojiji ọ bụla maka imepụta ọkụ eletrik na-ewere ọnọdụ n'akụkụ ụfọdụ n'ụwa, ebe enwere ọnọdụ ụfọdụ. dị oke mkpa, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji uru nke ebumnuche nke ikpo ọkụ, ohere ndị a na-abawanye ụba.
Ngwa geothermal na-adabere na njirimara nke isi ọ bụla. A na-ejikarị ihe ndị dị elu na-eme ka mmiri dị elu (karịa 100-150ºC) mmepụta ọkụ eletrik. Mgbe okpomoku mmiri adịghị ezu iji mepụta ike eletriki, isi ihe eji arụ ọrụ ya bụ ọkụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọrụ yana ngalaba obibi.
Sweden bụ mba Europe izizi jiri ike ikuku, n'ihi nsogbu mmanụ mmanụ nke 1979. Na mba ndị ọzọ dị ka Finland, United States, Japan, Germany, Holland na France, ike ụwa bụ ike a maara nke ọma nke etinyegoro kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka uru na ọghọm dị na nke a emere maka mmeghari ohuru, ndị na-esonụ kwụpụta:
Ọ bụ kpam kpam free na mpaghara, ebe ọ bụ na ọ dabereghị na ndị ọzọ maka iji ya.
Ọ bụ mmeghari ke uwa, na ihe nke ahụ pụtara na usoro nke gas umu anwuru si uto griin haus, na karịsịa, carbon dioxide.
Ọ na-amasị mmepe nke ụlọ ọrụ mpaghara, na mgbakwunye na ịmepụta ụdị ọrụ ruru eru.
Irụ ọrụ ihe na-ekpo ọkụ nke akụrụngwa adịchaghị elu.
A na-achọkarị itinye ego buru ibu iji mee ihe eletriki a, mgbe na mgbakwunye ike mmịpụta adịghị elu.
Nrigbu nke nkwụnye ego na-agụnye mgbe ụfọdụ oke nke ejighị n'aka, ọkachasị n'ihi ọdịiche dị na ikike ya na nyocha na nrigbu. Nke a bụ ihe na-ebute nnukwu mgbanwe na uru nke ọrụ ndị a.
Ojiji nke ihe omuma a ka emee ya na ebe esitere, yabụ na oge ụfọdụ akụrụngwa dị pụọ n'obodo ndị mepere emepe, n'ụzọ bụ isi mgbe enwere ọkụ eletrik.
Ike ikuku na Spain
Na Spen n'iji ike a eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ọ nweghị ike. Banyere mmepụta ọkụ eletrik, naanị Islands Canary N'ihi mmalite ugwu mgbawa ha, ha ga-enwe ikike zuru ezu iji kwado nrụnye, ebe ojiji ha maka ebumnuche ọkụ nwere ike ijiworị n'ọtụtụ ebe.
Ozi kachasị ọhụrụ na-eduga anyị n'eziokwu bụ na Galicia nwere ike bụrụ otu n'ime obodo ndị ọsụ ụzọ na iji ike geothermal maka ikpo oku, ikuku oyi na mmiri ọkụ na ụlọ. Enweela ọbụna okwu banyere ụlọ ọrụ nrụpụta ọkụ izizi mbụ
Nke a dị iche na eziokwu nke mba ndị ọzọ, ndị dị otú ahụ bụ okwu banyere Chile, ebe akpa geothermal osisi na South America , na itinye ego karịrị nde dolla 320, nke ga-eweta ike maka ezinụlọ 165000.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ike arụnyere na 48 MW nke ga-ewepụta ihe dịka 340 GWh kwa afọ.
Mwepu nke mmiri dị ala dị ala site na ime ụwa ma jiri ya, dịka ọmụmaatụ, na griin haus na-ekpo ọkụ, na-egosi uru na mmeputa nri horticultural,, ebe ọ bụ na a na-ahapụ ya ka ọ ghara ịzụlite oge ụdị ụdị osisi horticultural nke na-enweghị ike ịrụ ma ọ bụghị.
Na mpaghara obibi na ọrụ, a pụkwara iji akụ a mee ihe n'ihi na ọ chọrọ ume site na ala enthalpy.
Pụtara ìhè atụ nke ndị a ojiji nwere ike ịbụ ntụ oyi oru ngo nke nyiwe, teknuzu ụlọ na azụmahịa ogige nke Ígbọ okporo ígwè Pacífico nke dị na Madrid.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Uru na ọghọm nke ike ikuku